केबल पिगटेल बक्स, चीन केबल पिगटेल बक्स निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना - क्विन्डाओले फोटोनिक टेक्नोलोजी को।, लिमिटेड लागू गर्‍यो।
केबल pigtail बक्स
फाइबर अप्टिक केबल स्प्लिटिंग बक्स उपकरण FTTH प्रणालीमा प्रयोगकर्ता टर्मिनलको एक वायरिंग विभाजन उपकरण हो, र यसले वेल्डिंग, वितरण, र अप्टिकल फाइबरको समय तालिका जस्ता कार्यहरू महसुस गर्न सक्दछ। फाइबर ऑप्टिक फाइबर वितरण बक्स इन्टरफेस जडानको लागि प्रयोग गरिन्छ। ट्रंक अप्टिकल केबलको उपकरण र वितरण अप्टिकल केबल आउटडोर, कोरीडोर वा इनडोरमा। यो विशेष गरी फाइबर पहुँच नेटवर्कमा फाइबर टर्मिनेसन पोइन्टको लागि उपयुक्त छ। यसले फ्यूजनको भण्डारण र फाइबरको ताराहरूलाई समाहित गर्दछ, र मुख्य केबलको सीधा-मार्फत र डिस्क भण्डारण महसुस गर्न सक्दछ।
१. फाइबर अप्टिक केबल स्प्लिटि box्ग बक्स बाकस बडी, आन्तरिक संरचनात्मक सदस्य, फाइबर अप्टिक चल चालक कनेक्टर, एक अप्टिकल स्प्लिटर र एक अतिरिक्त एक्सेसरीबाट बनेको छ। यो एक सीधा-मार्फत र विभाजित फाइबर प्रकार्य छ; केबल पहुँच गर्न सजिलो छ, दोहोर्याउन सजिलो, धेरै अपरेशन्स, सील गर्न सजिलो। जडानको समयमा केबलको भण्डारण र वितरण पूरा गर्न त्यहाँ भित्री फाइबर वितरण बक्समा पर्याप्त कनेक्शन क्षेत्र हुनुपर्दछ।
२.भिन्न प्रकारका केबुलहरूसँग तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र इनलेट प्वाल हुनुपर्दछ, र प्वाल क्षमता पूर्ण कन्फिगरेसनको आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्दछ। अप्टिकल फाइबर चेसिसमा राम्रोसँग आरक्षित हुनुपर्दछ, र आरक्षित लम्बाई माध्यमिक जडानको कार्यका लागि उपयुक्त छ। पानी र टेकिएको वस्तुहरू घेरामा प्रवेश गर्नबाट रोक्न केबुलहरू बन्द गर्नुपर्दछ। निश्चित संख्याको केबल प्रबन्धन रिंगहरू वा अन्य ligature सामानहरू प्रदान गर्नुहोस् लासिंग लाइनको आधारभूत आवश्यकताहरूको सुविधा पुर्‍याउन।
The. आउटडोर पोल इरेक्शनका लागि प्रयोग गरिएको फाइबर डिभिडिंग बक्स फिक्सिंग कोष्ठक र बोल्टले सुसज्जित हुनेछ बक्सको स्थिरता सुनिश्चित गर्न। बाहिरी क्याबिनेटले सबै केबल आउटलेटहरूको उद्घाटन व्यास सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
१) मेट्रो / पहुँच सञ्चार नेटवर्क
२) फाइबर अप्टिक उपकरणहरू
)) CATV प्रणाली
)) अप्टिकल सिग्नल वितरण